သင့်ချစ်သူဖောက်ပြန်နေပြီးလား? – Sunthit Myanmar
ချစ်သူသက်တမ်းကြာလာသည်နှင့်အမျှ အမျိုးသားဘက်ကရော၊ အမျိုးသမီးဘက်ကရော နောက်မီးလင်းတတ်ပါတယ်။ ယခု ခေတ်စကားအရဆိုရင်တော့ ခြံခုန် တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ချစ်သူ ဖောက်ပြန်နေပြီးလား ဆိုတာကို ခန့်မှန်းနိုင်စေဖို့ အချက်အလက်တွေကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ချစ်သူဟာ သူ့ရဲ့အချိန်တော်တော်များများကို ဖုန်းအတွက်ပဲပေးထားတာမျိုးပါ။ အထူးသဖြင့် သင်နဲ့ အတူတူရှိနေတဲ့ အချိန်တွင်တောင်မှ ဖုန်းကိုပဲ အာရုံစိုက်နေတယ် ဂိမ်းဆော့နေတာက ကိစ္စမရှိပါဘူး၊ ဂိမ်းမဆော့ပဲ စာတွေရိုက်နေမယ်၊ စကားတွေပြောနေမယ်၊ ဖုန်းကိုကြည့်ပြီးပျော်နေတယ် ဆိုရင်တော့ သင့်ချစ်သူဖောက်ပြန်တော့မယ့် ပထမခြေလှမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
(၂) ဖုန်းတွေကို silent ချထားမယ်၊ တချို့ဖုန်းတွေကို မကိုင်တော့ဘူး
သင်နဲ့ အတူရှိချိန် တော်တော်များများမှာ ဖုန်းကို အကြောင်းမဲ့ silent ချထားမယ်၊ တချို့ အဝင်ဖုန်းတွေကို ဝင်လာတာနဲ့ ချက်ချင်း ချလိုက်တာမျိုးတွေ လုပ်လာနေပြီးဆိုရင် သင့်ချစ်သူကို သတိထားဖို့ လိုလာပါပြီး။
ဖုန်းလို့ဆိုပေမယ့် သူ့ရဲ့ တစ်ကိုယ်ရည်သုံး ဖုန်းတို့ ကွန်ပျူတာတို့လိုမျိုးပစ္စည်းတွေကို သင့်ကို ပေးမသုံးတာမျိုး၊ password ချထားတာကို မပြောပြတာ သင့်ရဲ့ facebook အကောက်ကို ပေးမကြည့်တာမျိုးတွေ လုပ်လာနေပြီးဆိုရင် သင့်ချစ်သူ ဖောက်ပြန်နေပြီးလား ဆိုတာ သံတယရှိစရာပါ။
(၄) အတူတူနေချိန်တွေမှာ သွေးအေးလာမယ်
သင့်ချစ်သူနဲ့ ၂ယောက်တည်း ညစာစားတဲ့အချိန်၊ ရုပ်ရှင်အတူကြည့်တဲ့အချိန်တွေမှာ နောက်ဆုံး လိင်ဆက်ဆံချိန်တွေမှာပါ စိတ်မပါပဲ သွေးအေးနေမယ်၊ ချိန်းဆိုမှုတွေကို အကြောင်းမရှိပဲ ရှောင်လာနေပြီးဆိုရင်တော့ သင့်ချစ်သူကို သတိထားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
(၅) သင့်ရဲ့ မေးခွန်တွေကို ကြောက်ကန်ကန်ပြီး ပြောလာမယ်
သင်က သဘောရိုးဖြင့် ဘယ်မှာ ရှိနေလဲ၊ ဘာလုပ်နေလဲလို့ မေးလိုက်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို သူကကြောက်ကန်ကန်တဲ့ လေသံဖြင့် ဘာလုပ်ဖို့မေးတာလဲ၊ မယုံလို့လားလို့ ပြန်မေးလာပြီး အဆင်မပြေတဲ့ စကားတွေပြန်ပြောနေပြီး ဆိုတာက သင့်ချစ်သူမှာ သင့်ကိုမသိစေချင်တဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုရှိနေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
(၆) သင့်အပေါ် အပြစ်မြင်မှုများလာမယ်
သင့်အနေဖြင့် ချစ်လို့စတာတွေ၊ ပုံမှန်အတိုင်းပဲ ပြောဆိုနေတာတွေ အပေါ်မှာ အပြစ်မရှိ အပြစ်ရှာပြီး ပြဿနာတွေရှာလာမယ်။ ပြဿနာ အသေးလေးကို အကြီးဖြစ်အောင် လုပ်ပြီး အပြစ်တွေပြောလာနေပြီးဆိုရင်တော့ သင်သတိထားပါ။ ဒါဟာ သူ့အပြစ် တစ်ခုခုကို ဖုံးကွယ်ချင်လို့ သင့်ကို အပြစ်ရှာနေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလို အချက်တွေ သင့်ချစ်သူမှာ ရှိလာနေပြီးဆိုရင်တော့ သင့်အနေဖြင့် သတိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ချစ်သူ တကယ်ပဲ ဖောက်ပြန်နေတာလား၊ သူဘာများဖြစ်နေလို့ပါလဲဆိုတာကို သေခြာအောင် လေ့လာဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
Categorized as Lifestyle Tagged သင့္ခ်စ္သူေဖာက္ျပန္ေနျပီးလား?
သင်မသိသေးသည့် Google Chrome Feature (၇) ခု